Ny rafitra fanaraha-maso sy ny fiarovana, Shina Ny rafitra fanaraha-maso sy ny rafitra fiarovana mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - HNAC Technology Co., Ltd
Home>Mpanome vokatra>Fitaovam-pitaovana mekanika sy elektrika feno>Ny rafitra fanaraha-maso sy ny fiarovana
Ny tobim-pamokarana herinaratra dia tobin-jiro izay mamadika ny angovo mety sy kinetika amin'ny rano ho angovo elektrika. Ny rafitra fanaraha-maso sy fiarovana ny tobim-pamokarana herinaratra dia rafitra fitaovana izay manara-maso, manara-maso ary miaro an'io fizotry ny fiovan'ny angovo io.
Ny asa lehibe indrindra amin'ny rafitra fanaraha-maso sy fiarovana ny tobin-dranomandry dia ny manara-maso sy manara-maso ny fifindran'ny rano sy ny rafitra famokarana herinaratra, fitaovana sy rafitra mekanika hydraulic, fitaovana sy rafitra elektrika, vavahadin-drano sy rafitra hydraulic, sns., mba hiantohana ny azo antoka, mahomby ary ara-toekarena amin'ny toby famokarana herinaratra.
1. Ny rafitra fanaraha-maso ny tobim-pamokarana herinaratra dia ahitana indrindra ny rafitra fandrefesana, rafitra famantarana, rafitra fiasana ary rafitra fanitsiana ny tobin-drano. Amin'izao fotoana izao, ny rafitra informatika amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny fanatanterahana ny fanaraha-maso ny toby famokarana herinaratra.
2. Ny rafitra fiarovana amin'ny toby famokarana herinaratra dia ahitana indrindra ny fiarovana ny rafi-drano, ny fiarovana ny fitaovana mekanika ary ny fiarovana ny fitaovana elektrika, toy ny fiarovana amin'ny toby tondra-drano, ny fiarovana ny hafainganam-pandeha mahery vaika, ny fiarovana amin'ny hafanana, ny fiarovana ny tsindry ambany amin'ny lozam-pifamoivoizana amin'ny fitaovana fanerena solika, ary ny fiarovana ny fampitana fitaovana elektrika.